Guryaha lagu kireeyo gacanta labaad oo qiimahoodu sarreeyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
In gacan labaad guri lagu kireeysto ayaa xal u ah dad badan oo ay hooy la'aan haysato. Foto: Christine Olsson /TT.
Guryaha lagu kireeyo gacanta labaad oo qiimahoodu sarreeyo
Kirada guryaha gacanta labaad
La cusbooneeyay tisdag 29 augusti 2017 kl 11.23
La daabacay tisdag 29 augusti 2017 kl 10.04
Cidda kireeysata guri gacan labaad ah ayaa inta badan bixisa laba jibbaar inta uu isla gurigaa ka bixiyo cidda haysata gacanta koowaad ee kirada. P4 Stockholm iyo P5 STHLM oo baaris middaa ku sameeyey ayey ku muuqatay in dadyoow badani bixiyaan kirrooyin gacan labaad ee sarreeya.
–Waxaan codsadaa in la bixiyo inta kiradu ay tahay iyo kharashka yaryar ee kale ee ku baxa bishii, si aan isugu fillaan karo. Maadaama aanan wakhtigan iminka la joogo awood u lahayn inaan halkan sii deggenaado, sida uu idaacadda P4 oo la xiriirtay uu u sheegay mid ka mid ah dadyoowga guryaha ku kireeyay gacanta labaad.
Kirada uu guriga ku dalbaday ayaa ahayd 13 000 oo koron oo qiyaastii saddex jeer ka badnayd kirada uu ku bixiyo guriga.
Waxaad ula jeeddaa in kiradni tahay middii caadiga ahayd?
Waayo waxaan soo baaray kirada aad qandaraaska ku haysato oo ah 4 – 5 000 oo koron. Adiguna waxaad leedahay waa 13 000 oo koron.
Cidda kireeysa guri gacan labaad ah oo horay looga kireeyay ayaa xaq u leh inay ku kireeyso kirada aasaasiga ah ee guriga, kharashka yar yar ee, sida korontada, xiriirka internet-ka iyo wixii la mid ah iyo 10-15% haddii uu gurigu qalabeey-san yahay.
Hase yeeshee u dhuur gal ey middaa ku sameeyeen laamaha idaacadda ee P4 Stockholm iyo P5 STHLM waxaa ku caddaatay in xayeeysiinno badan lagu dalbado kirooyin aan sharci ahayn.
Lixdii bilood ee sannadka ugu horreeyey ayaa 5 000 oo guryaha kirooyinka loogu jiro lagu xayeesiiyey bogga internetka ee Blocket oo kolkii aannu u barbar dhigney heerka kirooyinka la xayeeysiiyey ey laba jibbaar kiradu ka badnayd kiradii markii hore lagu kireeyey guryaha.
Kirooyinka ugu sarreeyey ee xayeeysiinta guryaha gacanta labaad lagu doonayay ayaa ku yaaley degmada Botkyrka.
Kim Lindholm, madaxa ururka kireeysteyaasha ee nawaaxiga Botkyrka-Salem ayaa aaminsan inay ugu wacnaan karto iyada oo ey kirooyinka degmada Botkyrka ka hooseeyso meelo badan ee gobolka ka tirsan.
–Middaa ayaa dhab ahaantii ugu wacan, maadaama aanay xaafadda ku dhaqneeyn bulsho dhaqaalahoodu xooggan yahay, sida uu sheegay.
Marka haddii loo barbar-dhigo kirada gacan labaadka waxay noqon mid sarreeysa?
–Waa sidaa. Waxaa u dhaxeeyn kara farqi 300-400 oo koron halkii kvadrat mitir sannadkii oo ku saleey-san goobta aad u barbar dhigto ee Stockholm.